आजको खेलमा लियोनल मेस्सीले पिएसजीका लागि डेब्यु गर्दै !!
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता August 29, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठ्माण्डौ। बिश्व प्रसिद्ध महान खेलाडी लियोनेल मेस्सीले आज पिएसजी बाट आफ्नो डेब्यू गर्दैछन्।
बार्सिलनाबाट यही सिजन पिएसजि पुगेका मेस्सीले आज बेलुका रेइम्ससँग हुने खेलमा डेब्यू गर्ने जानकारी बाहिर आएको छ।
२१ वर्ष बार्सिलोनामा बसेका मेस्सी यही सिजन फ्री ट्रान्सफरमा पीएसजि पुगेका हुन्।
६ पटकका विश्व वर्ष खेलाडि मेस्सीको आज हुने खेल निकै बहु प्रतिक्षित मानिएको छ।
पीएसजीले आफ्नो सिजन सुरु गरिसकेता पनि मेस्सी लगायत नयाँ खेलाडीहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खेल्न पाउने हुदाँ मेस्सीको डेब्यू थोरै ढिला हुन पुगेको छ। पिएस्जीले अघिल्लो साता आफ्ना खेलाडीहरुलाई दर्शकहरू माझ प्रस्तुत गरेको थियो।
उनका बार्सिलोनाका साथी जेरार्ड पिके ले त उनको डेब्यू खेलका लागि प्रशारण अधिकार नै खरिद गरेको भन्ने समाचार अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरुले बताएका छन्।
पीएसजी मा उनी सँगै यसपाली आबद्ध भएका रियल म्याड्रिडका डिफेन्डर सर्जियो रामोस्ले पनि मौका पाउने चर्चा उत्तिकै छ।
सधैँ महंगो रकम खर्चेर खेलाडी भित्र्याउने गरेको पेरिस यसपालि भने बेग्लै किसिमले आक्रामक बनेको छ। इन्टर मिलानका हकीमीलाई बाहेक अरु कसैमा ठूलो रकम खर्चेको छैन।
ट्रान्सफरको हिसाबले पिएसजिले यो सिजन उत्कृष्ट रणनीति देखाएको छ। एसी मिलनका किपर डनारुम्मा, बार्सिलोनाका मेस्सी, रियाल मड्रिडका रामोस र लिवरपुलका वाइनलडम जस्ता हस्तीहरुलाई फ्री मै आफ्नो क्लबमा अनुबन्धन गर्न सक्षम भएको छ।
प्रशिद्ध र क्षमतावान खेलाडीहरूको घुइँचो लागेको पीएसजी को यो सिजनको टिम युरोपमै सबै भन्दा उत्कृष्ट रहेको छ। अग्रपंतिमा मेस्सी, नेमार र एमबाप्पे को जोडीले ठूलै तहल्का मच्चाउने कुरा थुप्रै विश्लेषकहरुले मान्ने गरेका छन्।
खेल आज बेलुकी १२:४५ मा, रेइम्सको होममा हुदै छ।
Posted in अन्तरष्ट्रिय फुटबल, फुटबलTagged #Messi #psg #psg vs reims
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौ | एथलेटिक बिल्बाओ बिरुद्दको पछिल्लो खेलमा बराबरी गरेको बार्सिलोनाले आजको खेलमा भने जित निकालेको छ। क्याम्प नौमा भएको खेलमा गेटाफेलाई बार्सिलोनाले २-१ को गोलान्तरले पराजित गरेको हो। सर्जियो रोबर्टोको गोलमा दोस्रो मिनेटमा नै अग्रता लिएको बार्सिलोनाले सुरुवाती मिनेटबाटै पाहुना टोलिलाइ दबाबमा राखेको थियो। अट्याकलाई विशेषता दिएको […]
टोकियो ओलम्पिक २०२०| स्वर्णका लागि ब्राजिल र स्पेन भिड्ने
रोनाल्डो र रुनीको वाकयुद्ध
एल क्लासिकोमा रियल मड्रिडलाई लगातार सफलता, कप फाइनलमा प्रवेश
शोकमा डुबेका रोनाल्डोलाई फुटबल जगतबाट समवेदना र श्रद्धाञ्जी , यस्तो छ ट्विटर प्रतिक्रिया !!
“मेस्सी बार्सिलोनामा चम्किए, अर्जेन्टिनामा सधैँ उत्कृस्ट छन्, पेरिसमा पनि चम्किनेछन कुनै संका छैन”
भोलि चाइनिज ताइपाइको सामना गर्दै नेपाल : कस्तो अवसरको मौका छ त नेपाललाइ ?